एडीबीका परियोजनामा हालसम्मकै उच्च खर्च - Aarthiknews
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा भएको खर्च हालसम्मकै उच्च देखिएको छ । एडीबीको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनामा सन् २०१९ मा रू. ४८ अर्ब २२ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा रू. ३६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको छ जुन हालसम्मको उच्च हो । सन् २०१७ मा यस्तो खर्च रू. ३० अर्ब २४ करोड थियो भने २०१८ मा यो घटेर रू. २८ अर्ब ११ करोडमा सीमित भएको थियो ।
दाताको सहयोगअनुसार नेपालले खर्च गर्न नसकेको गुनासो यसअघि हुने गरेकोमा यस वर्ष भने विभिन्न परियोजनामा त्यस्तो खर्च उल्लेखनीय भएको एडीबीको प्रतिवेदनले देखाउँछ । २०१९ मा पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय खर्च भई विगत ५ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा राम्रो खर्च भएको समीक्षा एडीबीले गरेको छ । एडीबीले हरेक वर्ष आफ्नो लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूको समीक्षा गर्दै आएको छ ।
एडीबीका अनुसार सन् २०१९ मा मुख्यतः भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषि, खाद्य, ऊर्जा, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय खर्च भएको मंगलवार पोर्टफोलियो समीक्षा गर्दै एबीडीका नेपाल निर्देशक मुख्तोर खामुद्खानोभले बताए ।
एडीबीका अनुसार ‘भूकम्प आकस्मिक सहायता आयोजना’मा रू. ४ अर्ब ३९ करोड, सासेक परियोजनामा रू. ३ अर्ब २७ करोड खर्च भएको छ ।
यस्तै, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनामा रू.२ अर्ब ५२ करोड, ग्रामीण पूर्वाधार सुधार परियोजनामा रू. २ अर्ब २८ करोड, खाद्य सुरक्षा तथा कृषिको व्यवसायीकरण परियोजनामा रू.२ अर्ब ८५ करोड खर्च भएको एडीबीको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
यस अवधिमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्चका हिसाबले नेपाल दक्षिण एशियामै अगाडि भएको समीक्षा बैंकले गरेको छ । यद्यपि, दक्ष जनशक्ति, सुरक्षा आदिको अभाव टड्कारो रहेको एडीबीको भनाइ छ ।
यसैलाई औंल्याउँदै एडीबी नेपालका निर्देशक खामुद्खानोभले नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनको तहमा रहेका कर्मचारीको क्षमता बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार जटिल भौगोलिक अवस्था, संघीय प्रणालीमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतको समस्याका कारण एडीबीबाट सञ्चालित आयोजनाहरूले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गतवर्षको उपलब्धिभन्दा यस वर्ष थप राम्रो हुने बताए । उनका अनुसार एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनालाई थप गति दिन आयोजना व्यवस्थापन, खरीद व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वय बढाउन सरकारले पहल गर्नेछ ।